किन गरिन्छ कुकर पूजा ? यस्ताे छ शास्त्रीय मान्यता - OK Khabar
किन गरिन्छ कुकर पूजा ? यस्ताे छ शास्त्रीय मान्यता
ओके खबर २९ कार्तिक २०७७, शनिबार ०७:५१ मा प्रकाशित ( ५ महिना अघि) ३२१ पाठक संख्या
काठमाडौं । तिहारको दोस्रो दिन आज कुकुरको पूजा गरी मनाइँदैछ । दोस्रो दिन मनाइने कुकुर तिहारमा सबैभन्दा इमान्दार प्राणी कुकुरलाई पूजा गर्ने चलन छ ।
वर्षभरि हाम्रो धनसम्पत्ति, घरको सुरक्षा, मानिसप्रति बफादारी हुने गरेकोमा यस दिन कुकुरलाई पूजेर, माला लगाइदिएर र मीठा खानेकुराहरु दिएर ‘कृतज्ञता’ ज्ञापन गरिन्छ ।
कुकुर तिहार यमपञ्चकको दोस्रो दिन अर्थात् कात्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइन्छ । साथै नरक चतुर्दशी पनि भनिन्छ ।
जसका सम्बन्धमा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक मान्यता रहँदै आएको छ ।
कुकुरलाई पनि यमदूतका रूपमा पुज्ने गरिन्छ । कुकुर यमराजको अर्को प्रियभक्त हो । कुकुरलाई आज्ञापालक एवं रक्षक मात्र मानिँदैन, विभिन्न अपराध गर्ने अपराधीहरू पत्ता लगाउने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने कार्य पनि कुकुरले गर्छ ।काठमाडौं ।